Commons:တစ်နှစ်တာအတွင်း အကောင်းဆုံးပုံ/၂၀၁၄/ရလာဒ်များ - Wikimedia Commons
This page isatranslated version ofapage Commons:Picture of the Year/2014/Results and the translation is 89% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Picture of the Year/2014/Results and have to be approved byatranslation administrator.
၂၀၁၄ ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံ
အီကွေဒေါနိုင်ငံရှိ ဂျူလီယာ လိပ်ပြာနှစ်ကောင် (Dryas iulia) မှ လိပ်များ၏ မျက်ရည်ကို သောက်သုံးနေစဉ်
မှတ်ယူနိုင်ခြင်း:	amalavida.tv (flickr)
ဝေမျှမည်: ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် တွစ်တာ E-MAIL GOOGLE+
ဒုတိယ နေရာ: အန္တာတိက ရေပြင်တွင်းသို့ ခုန်ဆင်းနေသော အင်ပါယာပင်ဂွင်းငှက် (Aptenodytes forsteri) တစ်ကောင် – မှတ်ယူနိုင်ခြင်း: Christopher Michel / Cmichel67 (flickr) (CC BY 2.0)
တတိယ နေရာ: High above Tocopilla, Chile, one of SQMs Boxcabs coasts downhill to the Reverso switchback. – မှတ်ယူနိုင်ခြင်း: Kabelleger / David Gubler	(CC BY-SA 4.0)
#4: လီဂျင်း၊ ယူနန်ပြည်နယ်၊ တရုတ်နိုင်ငံ: ဒေသသုံး ခြင်းတောင်းများကို သယ်ပိုးထားကြသော Nakhi လူမျိုးများ – မှတ်ယူနိုင်ခြင်း: CEphoto, Uwe Aranas / Cccefalon (CC BY-SA 3.0)
#5:နော်ဝေနိုင်ငံ၊ Svalbard ဒေသ၊ စပစ်ဘာဂျန်ကျွန်းပေါ်ရှိ ခုန်ကူးနေသော ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံ။ – မှတ်ယူနိုင်ခြင်း: Arturo de Frias Marques (CC BY-SA 4.0)
#6: အော်ရီယွန် ကြယ်တာရာတွင်းရှိ နက်ရှိုင်းသော မြင်းခေါင်းနက်ဗျူလာ (IC 434 နက်ဗျူလာ ထဲရှိ Barnard 33 ဟူ၍လည်း ခေါ်သည်။) – မှတ်ယူနိုင်ခြင်း: Ken Crawford (imagingdeepsky.com) (CC BY-SA 3.0)
#8: Calliphora vicina တစ်ကောင်၏ ဦးခေါင်း၊ ရှေ့မျက်နှာဖက်မှ မြင်ရပုံ။ – မှတ်ယူနိုင်ခြင်း: USGS Bee Inventory and Monitoring Lab (flickr) (CC BY 2.0)
#9: Mandarin (Aix galericulata) မောင်နှံ၊ Martin Mere, Lancashire, UK – မှတ်ယူနိုင်ခြင်း: Francis C. Franklin / Baresi franco (CC BY-SA 3.0)
#11:	ဂျာမဏီနိုင်ငံ၊ မြောက်ရွိုင်းဝစ်ဖလီးယား၊ Dülmen အနီးရှိ နံနက်မြူခိုးများကြားမှ နေထွက်ချိန်။ – မှတ်ယူနိုင်ခြင်း: Dietmar Rabich / XRay (CC BY-SA 4.0)
#12: U.S. မရိန်းတပ်ဖွဲ့ C-130T ဟာကျူလီ လေယာဉ်နှင့် အပြာရောင်အိန်ဂျယ်များ – မှတ်ယူနိုင်ခြင်း: DoD photo by Staff Sgt. Oscar L. Olive IV, U.S. Marine Corps/Released. (flickr) (PD-USGov-Marines)
မဲပေးသူ 6,698 ယောက် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်
ပထမ နှင့် ဒုတိယအချီများမှ ရလာဒ်များအား အသေးစိတ်သိလိုပါက ဤနေရာတွင် ကြည့်ရန်။
နောက်ဆုံးအဆင့်စာရင်းဝင် ၅၄ ပုံအား ဤနေရာ တွင် ကြည့်ရန်။
Retrieved from "https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Commons:Picture_of_the_Year/2014/Results/my&oldid=303803059"